कार दुर्घटना : हरेक मानिसको मनमा बसेका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरको दु:खद निधन – Hamrosandesh.com
डरलाग्दो सडक दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ केतन खुर्जेकरसहित दुईजनाको मृत्यु भएको हो । आइतबार राति मुम्बई–पुणे राजमार्गमा भएको एउटा भयानक सडक दुर्घटनामा दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
भनिन्छ कि डाक्टरहरूले सडकमा पंचर कारको पाङग्रा परिवर्तन गर्दै थिए । यस बीच, बस पछाडिबाट आएको बसले जोडदार ठक्कर मार्यो । चार जना कारमा सवार थिए । दुर्घटना पछि राजमार्ग लामो समयको लागि जाम भयो । तलेगांव दाभाडेका इन्स्पेक्टर किशोर म्हस्वाडेले सोमबार बिहान १०ः३० बजे सुमातेन गाउँ नजिक दुर्घटना भएको बताउनुभयो ।
दुर्घटनामा ४४ वर्षीय केतन खुर्जेकर र दुई अन्य आर्थोपेडिक सर्जनहरू पुणेबाट एउटा ट्याक्सीमा मुम्बई जाँदै थिए । जब क्याब गाउँमा आइपुग्यो, ड्राइभरले सडकको छेउमा गाडीलाई रोकेर त्यसको पाङग्रा बदल्न थालेका थिए । यस पछि, डाक्टरहरूले ड्राइभरलाई मद्दत गर्न थालेको बताइएको छ । डा. खुर्जेकर सचेती अस्पतालमा स्पाइन सर्जरी विभागका प्रमुख थिए ।
प्रहरी अधिकारीले भने कि जब क्याब चालकले टायर परिवर्तन गरिरहेको थिए तब पछाडिबाट आउँदै गरेको एक निजी बसले ती सबैलाई ठक्कर दियो । डा. खुर्जेकर र ट्याक्सी चालक २७ वर्षीय ज्ञानेश्वर भोसलेको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । अरु दुई डाक्टर घाइते भएका छन् ।